Bruno Fernandes oo markaan doonaya inuu ku biiro koox aan ahayn Manchester United! – Gool FM
(Manchester) 27 Jan 2020. Sida wararku ay sheegayaan xiddiga khadka dhexe ee kooxda Sporting Lisbon, Bruno Fernandes ayaa lagu soo waramayaa inuu door-bidayo inuu ku biiro Kooxda Real Madrid, halkii uu ku biiri lahaa Manchester United.
Bishii Janaayo oo dhan, Fernandes ayaa si aad ah loola xiriirinayay inuu u wareegayo kooxda ku ciyaarta garoonka Old Trafford, iyadoo xitaa la sheegay inuu heshiis la gaaray kooxda ka dheesha Premier League ka hor inta aan la isku khilaafin.
Si kastaba ha noqotee, Sporting Lisbon iyo Manchester United ayaa isku maan dhaafay lacagta, wadahadallada ayaa meel xun gaaray, xilli haatan ay kooxdiisa abuureeyso fursad ay kooxaha kale uga qeyb galaan tartanka saxiixa xiddiga reer Portugal.
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya Spain, Fernandes ayaa rajaynaya inay kooxda Real Madrid dalab ka soo gudbin doonto, ka hor dhammaadka bisha ama inta lagu jiro suuqa xagaaga.
Los Blancos ayaa la sheegay inay xiisaynaysay ka hor bilowgii xilli ciyaareedka, waaba ay soo afjareen xiisahooda markii ay ogaadeen qiimaha Sporting ku doonayso inay ku badalato laacibkan.
Yeelkeede, kooxda ka dhisan Waddanka Portugal ayaa la sheegay inay ku raadinayso lacag dhan 68 milyan oo gini, waana lacag aan aad u badnayn marka loo eego tayadda laacibkan khadka dhexe ee goolal dhaliska caanka ku ah.